Visual IVR ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်ကုမ္ပဏီ
သင်၏စီးပွားရေးကိုကြီးထွားစေရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားပေးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိသောလုပ်ငန်းရှင်အသင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဗဟုသုတနှင့်အတွေ့အကြုံပေါင်းစပ်မှုကြောင့်ခိုင်မာသောအသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးဘက်ပေါင်းစုံပါ ၀ င်သည့်Visual IVR လျှောက်လွှာကိုဖန်တီးလိုက်ခြင်းဖြင့်၎င်းသည်သင်၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကိုရေရှည်တည်တံ့ပြီးအကျိုးရှိစေပြီးသင့်ဖောက်သည်များအားကျေနပ်မှုရှိစေမည်။
တိုတိုပြောရရင်အချိန်ကုန်သက်သာစေတယ်၊ ​​သယံဇာတအသုံးချမှုကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ခြင်း၊ သင့်ရဲ့တိုးတက်မှုကိုရေရှည်တည်တံ့စေပြီးဖောက်သည်ကျေနပ်မှုနှုန်းနှင့်အမှတ်တံဆိပ်အပေါ်သစ္စာရှိမှုတို့ကိုတိုးပွားစေသည်။ Star Phone သည်လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအမှတ်တံဆိပ်အားသာချက်ကိုရရှိစေခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုအပြည့်အ ၀ ရရှိစေသည်။
Star Phone စနစ်သည်အထူးသဖြင့်အစိုးရအေဂျင်စီများ၊ ဘဏ်များ၊ အော်တိုကားရောင်းဝယ်သူများနှင့်ကားဂိုဒေါင်များ၊ အငှားကားများ၊ ပီဇာများနှင့်အခြားအရာများ,ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များမှာ Mercedes-Benz, McDonalds, HSBC, Sheraton, MasterCard စသည့်နိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီများပါဝင်သည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိလူများသည် visual IVR ရှိသည်
ပျမ်းမျှအားဖြင့်အက်ပလီကေးရှင်းများနေ့စဉ် install လုပ်နေသည်
What is Visual IVR system (Visual IVRs)? Visual IVR meaning?
Visual IVR စစ်ဆေးခြင်းဆိုတာဘာလဲ။?
What does Visual IVR transaction mean??
Visual IVR ခေါ်ဆိုမှုကဘာလဲ။?